बिहेकै दिन बेहुली छतबाट खसेर ढाड भाँ’चियो, बिहे गर्न आएका बेहुलाले अस्प,तालकै बेडमा सि,न्दुर भरे – Dainik Samchar
बेहुली आरती अस्पतालको खाट’मा सुतिरहेकी छिन् । नको हातमा मेहंदी लगाईएको छ । उनको छेउमा बसिर’हेको युवक उनका पति अव’धेश हुन् । जो उनकी पत्नीको रेख’देखमा छन्।
वास्तवमा, प्रतापगढ:को कुंडा क्षेत्रमा बस्ने आरतीको लागि विवा’हको तयारी पूरा भएको थियो र जन्ती आउँदै थिए । तर दिउँसो उनी आफ्नो तीन बर्षे भतिजालाई छ’तमा खेल्ने क्रममा ब’चाउन छतबाट ख’सिन् ।
दुर्घ’टनामा उनको ढाडको मे’रुदण्ड भाँचि’एको थियो र दुवै खुट्टामा पनि सम’स्या छ । घरका साथीहरूले उनलाई प्रयागराजको निजी अस्पता’लमा भर्ना गरे। जब दुलहा अवधेशलाई घट’नाको बारेमा खबर गयो । घट’नाको सत्यता र घ’टना पनि दुलहा अवधे’शलाई दिइयो।
आ’रतीको घरका मानिसहरूले अवधेशला’ई आरतीको का’न्छी बहिनीसँग बिहे गर्न भने तर अवधेशले निर्णय गरेका थिए कि आरती उसको जीव’नसाथी बन्न सक्छ, जे भए पनि जीवनभर उनलाई सह’योग गर्ने छ।
अव’धेशले आफ्नो धार्मिक पत्नी आरतीको पूरा ध्यान राख्छन्। दुबैको साहस र साह’सलाई सलाम गरेर नजि’कका आ’फन्तहरू र परि’वारका सदस्य पनि खु’सी भएका छन् ।
उही समयमा, आरतीको परिवार’ले डाक्टरसँग कुरा गरेपछि उनलाई एम्बुलेन्स’बाट कुंडा फिर्ता लगे र विवाह गरे । जहाँ अवधेशले ओछ्या’नमा रहेकी आर’तीलाई सिन्दुर लगाइदिए । त्य’सपछि आरतीलाई प्रया’गराजको यस अस्प’तालमा भर्ना गरियो।
अवधेश र आरती अहिले निकै खु’सी छन् । सम’स्यामा छायाँले जस्तै एक अर्काको सहयो’गी बनेकोमा । यस्तो अवस्थामा उनीहरू एक अर्का’लाई सहयोग गरेर व्यक्तिको लागि उदा’हरण बन्न पुगेका छन्। तिनीहरू वास्तवि’क जीवनको नायक भएका छन्। सबै’जनाले दुबैको यो निर्णयले उनीहरू’को प्रशंसा गर्दै छन्। एजेन्सी
Prevपाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, बैशाख २७ गते सोमबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
Nextदिपक मनाङ्गेको विश्व रेकड, १० दिनमै मन्त्री पद चैट
बलात्कृत अपांगलाई न्याय मुस्किल (677)
वास्तु शास्त्रः यी पाँच दोष, जसले घरमा निम्त्याउँछन् गरिबी र अशान्ती (503)
एम्बुलेन्स सञ्चालन भद्रगोल : निर्देशिका गज्जबको, कार्यान्वयन भेट्टाउनै गाह्रो ! (491)
नरिवल तेलको विवादः यसले फाइदा गर्छ कि साँच्चै विषालु हो ? (473)
यति धेरै भत्ता दिएर १ लाख म्यादी प्रहरीको भर्ना खोलिँदै , एक महिनाको तलब कति ? (452)